नेपाल आज | नेपाली मिडियाले अनावश्यक मान्छेलाई पनि हिरो बनाउँछ (भिडियोसहित)
भानुभक्त आचार्य क्यानडास्थित ओट्वा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानधाता हुनुहुन्छ । आमसञ्चार विषयका विज्ञ एवं ‘मिडिया अकाउन्टिविलिटी’का विद्यावारिधि पनि हुन् । नेपालको मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदिबारे आचार्यले बेलाबखत आफ्ना धारणाहरु लेखमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । केही वर्षदेखि क्यानडामा बस्दै आएका आचार्यसँग नेपाल आउँदा नेपालआजको जम्काभेट भएको छ ।
नेपालआजसँगको कुराकानीमा आचार्यले नेपाली मिडियाले औचित्यबिना नै केही मानिसहरुलाई ‘हिरो’ बनाउने गरेको टिप्पणी गरे । जस्तो कि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा रातभर घटनास्थलमा बसेका प्रहरीहरुबाट नेपाली मिडियामा प्रशंसाका पुलिन्दा जोडेर स्टोरीहरु बने । आचार्य भन्छन्, ‘जसको काम नै त्यस्तै अवस्थामा खटिनु पर्ने हुन्छ भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्ने के छ ? उनीहरु त आफ्नो संगठनभित्र मूल्यांकनका पात्र बन्नु पर्छ । मूल कुरा यो हो ।’
राम्रा मानिसहरुको खडेरी परिरहेको बेला एकाध मानिस निस्किदा त्यो हिरो बन्ने गरेको उनको ठहर छ । जस्तो कि अनुजा बानियाँलाई त तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले फोन नै गरे । एकाध मानिस राम्रो हुँदैमा समाज विकसित हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल पाँचौ अंग जस्तो भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई मानिसहरुले नेपालमा बढी दूरुपयोग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सभ्य भाषा मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ । म बस्ने क्यानडामै पनि सभ्य भाषामा मात्रै मानिसहरु आफ्ना धारणा राख्छन् । नेपालमा भने भिडन्त नै हुन खोज्छ ।
नेपाली मिडिया, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमा मान्छे नमर्दै समाचार छाप्न, श्रद्धाञ्जलि दिन हतार हुन्छ । यसलाई कम जिम्मेवार मिडिया र असचेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका कारण यस्तो भएको आचार्यको बुझाइ छ । मिडियाले छिटो र सत्य समाचार दिनु पर्छ । तर छिटो दिने मामिलामा असत्य दिनु हुँदैन । ढिलो भए पनि होस् तर असत्य नहोस् भन्ने ठान्नु पर्छ ।
नेपालमा सरकारले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्न सरकारले रोक लगाएको छ । तर प्लेकोर्ड बोकेर वा कालो झण्डा बोकेर कोही मानिस संसद अगाडि नै उभिन्छन् भने पनि छुट दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । उनको तर्कमा कालो झण्डा र प्लेकार्ड जति शान्तिपूर्ण प्रदेर्शन केही हुँदैन । कालो मन देखाउन सकिदैन । तर कालो झण्डा देखाउन सकिन्छ । असहमति जनाउने प्रतीक कालो झण्डा हो । यो कुरा नेपालमा सरकारले नबुझेकोमा आचार्य आश्चर्य प्रकट गर्छन् ।